Karaosmanoğlu: 'Waxaan dhameystireynaa Qeybta haray ee Wadada İznik | | RayHaber | raillynews
HomeGUUDKaraosmanoglu: uz Waxaan dhameystirnaa qaybta soo hartay ee wadada Isniinta "
Karaosmanoglu: uz Waxaan dhameystirnaa qaybta soo hartay ee wadada Isniinta "
07 / 06 / 2018 GUUD, WADADA, TURKEY
Midowga Degmooyinka Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Magaalada Kocaeli Magaalo Weyn Ibrahim Karaosmanoglu, 24 June ee Madaxtinimada iyo 27. In kasta oo ay kaqaybqaadaneyso barnaamijyada ay soo qabanqaabiyeen Xarunta Isutagga Isu-duwaha ee Xarunta Xisbiga AK Kocaeli ee Xarunta doorashada ee ku-xigeenka, dhanka kale, waxay sidoo kale sii wadeysaa kulamada ay la leedahay ururada aan dowliga ahayn iyo muwaadiniinta. Ugu dambeyntiina, Karaosmanoğlu, oo booqday ururka İznikliler Association ee degmada Gölcük Naval, wuxuu sidoo kale la kulmay bulshada iyo dadka deggan masjidka Sultan. Karaosmanoğlu, oo marti u ahaa Ururka Izniks markii ugu horreysay, wuxuu war wanaagsan ka siiyay waddada Iznik. Karaosmanoğlu wuxuu yiri, uz Waxaan bilaabeynaa dhismaha toddobadii kiiloomitir ee ugu dambeeyay wadada Iznik ugu dambeyn bisha Agoosto. Waxaan dhammeyn doonaa xilliga qaboobaha kahor imaatinka muwaadiniinteenu.
“Hirgalinta Adeegyada Degmooyinka waxay kuxirantahay waxqabadka siyaasadeed.”
Duqa Magaalada Gölcük Mehmet Ellibeş iyo Gudoomiyaha Xisbiga AK Party Idris Alp, oo ay kujiraan Madaxweynaha Karaosmanoğlu iyo wafdiga lasocda ayaa aad ujecel inay u adeegaan Iznikliler, Dowlada Hoose ee Magaalada Metropolitan ayaa uga mahad celisay Karaosmanoğlu howlihii loo qabtay. Duqa magaalada Karaosmanoğlu wuxuu cadeeyay inay hirgaliyay mashruuc kasta oo leh karti aad u balaaran uguna mahad celinayaan wada noolaanshaha Dowlada hoose ee Gölcük wuxuuna yiri :, Waxaan xaqiijineynaa dhamaan maal gashigeena Kocaeli qaab dhismeedka qorshaha. Guusha adeegyada maxalliga ah waxay sidoo kale kuxirantahay dowladda iyo xasilloonida siyaasadeed. Eeg Madaxweynaha our Recep Tayyip Turkey guurayaan waddo taas oo sii horumarinta ka 2002 ah. Si kastaba ha noqotee, jidkan ma fududa in la duubo. Cadaawayaasha gudaha iyo dibaddaba nasiibdarro waxay isku dayayaan inay ciyaaraan dhamaan ciyaaraha si ay noo joojiyaan ..
“MADAXWEYNAHAADA WUU KA SAMEEYAA MAGAALADA MADAXWEYNAHA”
Turkey waa hoggaamiye xoog leh oo kooxda guul waxa kale oo intaa ku daray in Duqa Ibraahim Kocaeli Metropolitan ee Karaosmanoğlu, "Maanta waa Madaxweynaha shaqo qiimo-daray our shuqullada dalka ka mid ah fahamka siyaasadeed uu hogaaminayo damacsan Turkey, nasiib daro, ma. Maanta, wada jir ah ula Madaxweynaha iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed agagaarka dalkeena, mustaqbalka la dadaalaya in ay awood Turkey. Siyaasadu maaha inay baabiiso shaqooyinka farshaxanka ee waa inay gashataa. Wiilkeenna Recep Tayyip Erdoğan, oo ah wiilka ummaddan, wuxuu ka soo baxay laabta ummaddan. Taliyahayaga guud wuxuu ka walwalay dhibaatooyinka umadiisa ".
"TURKEY TODAY ayaa jeexjeexay qolof ah"
Karaosmanoğlu wuxuu kaloo sheegay in intii uu ku guda jiray booqashadiisa Ururka Izniks ee agagaarka Navy, ay ahayd waajibaadkiisa ah in dhalinyarada gacanta lagu dhigo. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax carqalad ah oo nagu ah inaan soo saarno waxyaabo badan. Turkey ayaa jeexjeexan uu madfac maanta. Hadda doorashadii 24 Juun ayaa hortaada taagan si ay u noqdaan kuwa awood badan. Waxaan rajeynayaa in Madaxweynaha doorashadan isagoo siinaya aqlabiyadda baarlamaanka uu sii wadi doono shaqadiisa. Taasi waa waxa isbitaallada iyo safka daawada ay ahaayeen. Waligey ma hilmaami doono. Maalmihii ceeboobaa way ka dambeeyaan. Laakiin weligeen ma ilaawi doonno maalmahaas. Turkey, marnaba dib ugu ka 2002 sano. Waxaan rajeynayaa inuusan sidaas sameyn doonin. Dabcan, tani waa Madaxweyne xoog leh iyo baarlamaan adag. Uma baahnin Ameerika iyo Reer Galbeedka. Annaga oo ah warshadaha Difaaca, waxaan sare u qaadnay heerka qaranimadeenna. Waxaan gaarney guulo waaweyn waxaanan sii wadaynaa inaan sidaas samayno ”. Karaosmanoğlu wuxuu kaloo la kulmay ururka iyo dadka deggan masjidka Sultan ee xaafada Navy iyo hasbihal.
Karaosmanoglu: "Waxaan sameyneynaa waddo cusub oo ka hooseysa Dariska"
Arbaco 3 Km Qaybta Tareenka
Xaruntan Ergan Mountain Ski waxay dhamaystiraysaa diyaar garowga xilliga cusub
Nidaamka tareenada GASKI wuxuu dhamaystiraa khadadka biyaha ee cabbitaanka khadka Ibrahimim
Metropolitan, IZBAN waxay dhameeysaa dhismayaasha Torbalı (Sawir Sawir)
Turkiga wuxuu dhameystirayaa jidadka tareenka
TCDD ayaa dhamaystirtay farqiga, Bursa wuxuu ku xiran yahay tareenka xawaaraha sare iyo tareenada tareenada
Iznik Tile oo lagu qabanayo Marmaray Stations
Duufaanta Iznik ee Marmaray ayaa istaagay
Foornooyinka Iznik ee lagu isticmaalo Marmaris buufinta niyadjabka
BURULAS waxay qabanqaabin doontaa adeegga gawaarida ee Isniintii
Adeegyada safarka ee Orhangazi Iznik lacag la'aan ah maalinta saddexaad ee fasaxa
Maraakiibta Aksemseddin ayaa ku xardhan Bursa Iznik Lake!
TCK 14. Gobolka Iznik - Mekeje ayaa furay hindis ah dhismaha waddada
Heerka Koowaad ee Dhamaystiray Shaqada Asphalt ee Xarunta Manisa
Eastern Express Yarış Tam O "Sawir Sawir Qaran Qaran waa la soo gabagabeeyay
Tirada kiisaska cudurka 'coronavirus' ee adduunka ayaa ka badan 724 kun tirada dhimashada oo ah 34 kun